Uyivula njani i-Samsung Galaxy mini simahla | I-Androidsis
¿Uyazi njani ukuba iselfowuni simahla? Kule tutorial ilandelayo, ndiza kukucacisela ngendlela elula nekhululekileyo, indlela ukuvula Samsung Galaxy mini, okanye ikwaziwa njenge I-GT-S5570, ukuze sikwazi ukuyisebenzisa nomqhubi osifanela.
Kwisifundo esingaphambili, ndikubonise indlela ukuvula inani elungileyo terminals Samsung usebenzisa Galaxy yokuvulaNgelishwa, esi sixhobo silula asihambelani nefayile ye I-Samsung Galaxy mini, Kungenxa yeso sizathu sesi sifundo sitsha, oya kuthi ufumane kuso kwimizuzu embalwa, ukuvulwa kwe-Samsung Galaxy mini ukuze ukonwabele kunye nomsebenzisi omfunayo.
1 Isibhengezo esibalulekileyo
2 Ukulungiselela i-Samsung Galaxy mini
3 Ukukhupha i-terminal
Ukugqitywa kwesi sifundo, ayizukusenza isiqinisekiso sesiphelo sakhoKe ukuba uyithengile, cinga ngononophelo malunga nento oyenzayo kwaye uthathe uxanduva ngezenzo zakho.
Kuya kufuneka sibe nayo kufakwe imemori khadi ye-micro-usb Ngexesha lokufumana i ikhowudi yokuvula.
Ukulungiselela i-Samsung Galaxy mini
Into yokuqala ekufuneka siyenzile, iya kuncothula i-Samsung Galaxy miniUkusukela ukwenza olu luhlu lulandelayo kuya kufuneka sidibane neefayile zangaphakathi zomnxeba ngokwawo, kwaye ngenxa yoku kufuneka sibe neemvume zabangaphezulu.
Xa sele sinesiphelo sendlela ngokuchanekileyo Ingcambu, Siza kukhuphela usetyenziso lwe-Eminal ye-Android kwiVenkile yokudlala, Esisicelo esiza kuthi sikhuphe I-Samsung Galaxy mini ngendlela ekhululekileyo ngokupheleleyo.
Siza kwenza inkqubo yokuvula usebenzisa uthotho lwemiyalelo ukufikelela iifayile zangaphakathi yesiphelo yethu uze ufumane ikhowudi yokuvula eya kusivumela ukuba ukuvula ngempumelelo isixhobo yethu.
Kubalulekile ukuba khuphela imiyalelo njengoko ndiyincamathiselaUkuhlonipha izithuba kunye nayo yonke imiqondiso yokubhala.
Siza kuvula usetyenziso esivele sakhuphela kulo Play Store, kwaye ayikho enye into ngaphandle kwe I-Eminali yesiphelo se-Android.
Emva koko siza kwazisa lo myalelo ulandelayo:
su kwaye siya kucofa isitshixo faka, Ngale screen kuyakuvela esibuza iimvume zeyona super, siyakwamkela ukunika ilungelo leengcambu isicelo, kwaye siya kuqhubeka nale miyalelo ilandelayo.
ukukhwela -o nosuid, ro, nodev -t vfat / dev / ibhloko / stl5 / sdcard / ukuvula
ikati / ikhadi lesikhuseli/ukuvula / imits / iper.txt
Ngoku kwiscreen sesiphelo sethu, siya kuboniswa inani elide kakhulu eliphela ngoziro abaninzi, into enje: I-692457 # 9727481700000000000000000000000.
Siza kuyikopa loo khowudi kakuhle, kuba inxenye yayo iya kuba yeyethu esiya kuyisebenzisa ekugqibeleni vula i-Samsung Galaxy mini yethu. (ooziro abayi kufuna ukukhutshelwa).
Siza kuyigqiba inkqubo nge I-Eminali yesiphelo se-Android Chwetheza le miyalelo ilandelayo:
umount / sdcard / ukuvula
rm -r vula
Ngoku i I-Samsung Galaxy mini iya kuqalisa kwakhona, kwaye ukuba sele isebenze ngokupheleleyo, Siza kuyitshintsha iSIM khadi yoqobo ngomnye umsebenzisi, siya kuphawula IPIN de la EWE kumbuzo kwaye iscreen esitsha siza kuvela sisicela i ikhowudi yokuvula yenethiwekhi.
Ngoku siza kuthatha inani ebesilibhala ngaphambili, kodwa ziinombolo zayo ezisibhozo zokugqibela ngaphandle kwezero, ke ukusuka kwinombolo yoqobo, 692457 # 9727481700000000000000000000000.
Siza kuzisusa zonke ii-zeros, kwaye kwinani lesiphumo kufuneka sithathe kuphela amanani asibhozo okugqibela, kuba unjalo:
Inxalenye emnyama enesibindi iya kuba ikhowudi yokuvula ukusuka kwisiphelo sethu.
Siza ufake ikhowudi yokuvula kwi I-Samsung Galaxy mini, Nokuba ibuyise impazamo, siza kuba nesiphelo esivulekileyo ngokuchanekileyo, ukujonga ukuba singazama ukwenza nayiphi na ifowuni.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Indlela yokuvula i-Samsung Galaxy S kunye ne-Samsung Galaxy SII nge-Galaxy S Unlock, Ungayisusa njani i-terminal yakho ye-Android ngeSuperOneClick
Khuphela - Isiphelo sendlela ye-Android simahla
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Indlela ukuvula Samsung Galaxy mini ngokupheleleyo simahla
Izimvo ezi-242, shiya ezakho
Kulunge kakhulu!! Enkosi kakhulu kwaye ndicaciswe kakuhle !!
Enkosi kuwe ndiyavuma.
pablo pablo sitsho
Ndifumana xa ndibeka umthetho wayo ongafumanekiyo naxa ndibeka intaba…. Ibeka mount: opperation ayivumelekanga kwaye xa ndibeka into yekati ayindibeki fayile enjalo okanye umkhombandlela.algien unokundinceda !!!!
Phendula Pablo Pablo
Kungenxa yokuba awuyongcambu yomsebenzisi kwaye awunayo imvume ekhethekileyo, ngaphambi kokuba uqhubeke nale khokelo kufuneka unqande i-terminal yakho.
molo ngalo mzuzu ndilandela amanyathelo akho kodwa ndifika kule #chmod 555
# mount-o: ayifumaneki
naluphi na uluvo ndenza okungalunganga
Uxolo, kodwa andifumani sikrini ukubeka iphasiwedi yenethiwekhi. Iselfowni iqala xa ndibeka ipini kuyo kodwa ayibuzi isitshixo sokuvula. Ndenze amanyathelo amaxesha angama-20. Imile kakuhle, ine-rom engeyiyo iCyanogen (Ndafunda ukuba nge-Cyanogen rom isikrini esonwabisayo asizukuphuma). Andazi ndithini. Iselfowuni enentsusa yemovistar ukuba isebenza ngokuchanekileyo. Kodwa akukho nto, isikrini seqhosha lokuvula aliphumi.
Molo, kutshanje ndiyithengile le fowuni kwaye ibeka isitshixo embindini kwiscreen sokutshixa kwaye kwelinye icala indenza ndiqinisekise nakolunye olungxamisekileyo andazi ukuba ndenze ntoni
Molo ulungile, kuqala enkosi kakhulu ngegalelo, kodwa ndinengxaki kwaye ndiyifumene inombolo ndiyenzile yonke into ngokuchanekileyo kodwa xa ndivula ifowuni nge sim yomnye umsebenzisi andifumani sikrini sokufaka ikhowudi , naziphi na izimvo?
Kwaye ufumana ntoni, ngenisa inkqubo yokusebenza ngokuchanekileyo?.
Zama ukutsalela umnxeba ujonge ukuba uyakucela ukuba wenze njalo.
Ukuba iba yesiqhelo, ayifuni ikhowudi yokuvula kwaye xa ndibiza inkqubo yesiqhelo iyalandelwa kodwa kwangoko ibeka umnxeba uphele
Ekuphela kwento endinokucinga ngayo kukutshintsha i-sim yoqobo, wenze umnxeba emva koko uyitshintshele enye.
Ukuba oku akusebenzeli wena, phinda inkqubo kwakhona unike ingqalelo ekhethekileyo kuwo onke amanyathelo, musa ukukunika impazamo engakhange iqatshelwe.
Ukuhamba umhlobo akusasebenzi kwaye akabizi kunye nekhadi levodafone
Hee, uyazi ukuba ikhona indlela yokulungisa inkqubo? Iscreen sokuvula asiphumeli okanye sisebenza nge-sim yoqobo, okanye mhlawumbi ikhona indlela yokufaka inkqubo yokusebenza kwakhona okanye into enjalo, cima yonke into uphinde ufake enye i-rom, ndifuna into endinayo ndizamile yonke into kwaye akukho nto iyandisebenzela
Kuya kufuneka uphinde ukhanyise i-rom yoqobo, kwiphepha le-smobile.com unazo zonke izixhobo eziyimfuneko, kubandakanya nabaqhubi.
Into eyenzekileyo kuwe kungenxa yokuba awuyilandelanga inkqubo njengoko bendikuxelele, okanye wenze impazamo xa ungena kumyalelo.
I-firmware iya kuhlaziywa, ndiza kuzama ukufaka ezinye iirom kwaye akukho nto ayikasebenzi nekhadi loqobo, ngokungathi livimbe ngokuzenzekelayo ikhadi, imeko kukuba amanqaku okugubungela ayavela kodwa nje ukuba wenze Ukuyibiza kunqunyulwe ngaphambi kokuba uqale, mhlawumbi ungangena umyalelo kwi-emulator ye-Android ukufumana isikrini sokuvula, akunjalo?
Yintoni oyenzileyo ukuze 0123465789012346 ingaveli
Ngaba uyisombulule ingxaki? Kwenzeka into efanayo kum!
ukuba ndiza kuhlaziya i-firmware, kwaye ndizame ukufaka i-romsy
akukho nto ayikasebenzi nkqu nekhadi loqobo, ingathi
iya kuthi ibambe ngokuzenzekelayo ikhadi, imeko kukuba amanqaku ayavela
Ukugubungela kodwa nje ukuba wenze umnxeba kunqunyulwa ngaphambi kokuqala,
mhlawumbi ungangena umyalelo kwi-emulator ye-Android
ukuze isikrini sokuvula siphume, akunjalo?
Ndiza kuyiphinda le nkqubo ngononophelo olukhulu xa ndingena kwimiyalelo eyahlukeneyo
Sele ndiyiphindaphinde kathathu kwaye yonke into ihamba kakuhle, kuphela xa iinombolo ziphuma indibeka 3 # kwaye ihlala injalo ngaphandle kokushiya iscreen sokuvula
Andikwazi ukucinga ngento yokukuxelela ngakumbi, yiya kwimenyu yokuseta kwaye wenze ukuseta kwakhona kwifektri, emva koko uzame ukukhanyisa i-rom entsha nge-odin.
Umhlobo ofanayo, yonke into iyafana, ndicinga ukuba yinto endiyichukumisileyo kwinkqubo yesicelo se-emulator, awunakufaka umyalelo wokuzisa iscreen ukufaka ikhowudi yokutshixa?
Oko andazi mhlobo, kodwa ndiza kujonga, kwaye ukuba ndifumene into endizakuxelela yona.
Phinda ufake isim yoqobo kwaye wenze umnxeba, emva koko ubeke enye sim kwakhona kwaye ubone ukuba ifuna ikhowudi, ukuba akunjalo, zama kwakhona ukwenza umnxeba.
Ukuba oku akusebenzi kuwe, phinda inkqubo yokuvula kwakhona, uhlawula ingqalelo ekhethekileyo kuwo onke amanyathelo.
Molo, ndiyenzile yonke i-tutorial kwaye ngokomgaqo yonke into ihambe kakuhle kwaye ndifumene ikhowudi efana naleyo uyibeke apho, into embi kukuba ifowuni ayinakuqala kwakhona kwaye iscreen asiyeki ukukhanyisa nokucima kodwa ngaphandle kokuqala. Ukhona umntu owaziyo ukuba kwenzeke ntoni ???
Ndingenza ntoni ukusombulula le ???
Isikrini siyakhanya kwaye ungafunda isamsung kodwa iyazivale kwangoko ukuze ibuye kwimizuzwana embalwa kamva. kwaye ihlala injalo ngalo lonke ixesha. Andazi ndithini!!!!
Into eyenzekileyo kuwe kungenxa yokuba awuyilandelanga inkqubo njengoko bendikuxelele, okanye wenze impazamo komnye umthetho, sele ndikhuphe ngaphezulu kweetheminali ezingamashumi amabini ngale nkqubo kwaye zonke ziphumelele kwaye ngaphandle kwengxaki.
Umntu ukwazile ukumkhulula ... bendinaye eMovistar (ePeru) ndabeka iSim evela eClaro (ePeru) Yonke into ihambe kakuhle; Nditsalele umnxeba ndafumana iminxeba, ndathumela ndafumana imiyalezo; kodwa khange ihlale iyure emva koko wandibeka: Kuphela ziifowuni ezingxamisekileyo? Ithetha ngantoni le nto? Ndincede.
PD: Ngamanye amaxesha iba nguClaro; kodwa ndizama ukufowna iphume. Inethiwekhi ayifumaneki = S
Nasiphi na isisombululo ???
Iqela li-100% simahla ngokulandela amanyathelo akho.
Ndiyabulela kakhulu jhehe enkosi toi ndisindise i-euro ezingama-15 awandityhola ngazo ngokumkhulula
Ndiyakuvuyela ukuba luncedo.
Umhlobo Wethu sitsho
Ndiyikhuphele le nkqubo kwivenkile yokudlala kwaye xa ndingena kumyalelo su undixelela ukuba akafumaneki
Ewe, ndiyisusele ngaphandle kwengxaki.
Andazi ukuba uyayiqonda into yokuba uhluthe abantu abaninzi, ndicinga ukuba kukho iifowuni ezi-2 ezikhutshiweyo kwaye ngaphezulu kwe-100 eye yafa kumzamo, kuba awususi esihogweni esi sifundo sikufuphi kuba uza ukuqhubeka nokutshisa iifowuni kuye wonke umntu, kwabo banako, awuniki mhlobo kwaye kwabo baswelekileyo udlala isidenge kwaye awufaki nto okanye undikhulule 20 kwaye bahamba nge-10, kubonakala kum ngathi uyazi Ngaphantsi kwalowo ubambe nje iselfowuni! !!
Andazi ukuba yeyiphi indlela ekufuneka uyixelele, kodwa ke, ukuba uyaqhubeka noTuto kule leta, ndiyakuqinisekisa ukuba iyasebenza.
Ukongeza, umntu ngamnye unoxanduva lwezenzo zabo, kwaye ukuba awuqinisekanga ukuba uyazi okanye ungayenza, sukuyenza.
Nge-06/09/2012 ngo-06: 39, «Disqus» wabhala:
Nkqu neeguevos zaseArgentina sitsho
Ngaba bakubekile umpu esifubeni sakho ukuze uyenze? Uyalixabisa ixesha elichithwe ekuphakamiseni ezinye izisombululo, ngaphezulu okanye kancinci ukuphumelela, kodwa ukuba isicelo sixhomekeke kwiindlela nganye nganye.
Kodwa ke, kule nto uyithethayo, iikhrayitheriya yinto osilela kuyo.
Phendula Hasta los güevos de Argentinos
USamuweli Marchán Fernández De Di sitsho
Phendula kuSamuel Marchán Fernández De Di
Kwenzeka into efanayo kum, andazi kuba xa ndibeka i-k ngumyalelo wokuqala ubeka ukuba ndingafunyanwa
Kungenxa yokuba ngekhe ube ngumsebenzisi wengcambu, ngenxa yoko awunangcambu.
Kulungile. Ndinefowuni yam egxothiweyo, kwaye kwimenyu ndinayo isicelo "Superuser", emva koko kwi-emulator ndibeka "su" kwaye iphuma "Imvume inqatshelwe".
Khange ikhule kakuhle, kwenzeka into efanayo kum kwaye kufuneka siyenze kwakhona
UMiriam Entenza sitsho
okanye uyiqale kwakhona.
Phendula uMiriam Entenza
Ndibeka izitshixo emva kwenye ukubetha kungena nganye kwaye emva koko andifumani khowudi, umntu uyazi ukuba kutheni ingaphumi, nceda
Iingcebiso ezimbalwa kwimeko apho zinokusetyenziswa komnye umntu. Okokuqala, bonisa ukuba incwadana igqibelele kwaye icaciswe kakuhle. Ndifumene neengxaki endiye ndakwazi ukuzisombulula ngophando oluthile:
1.- Nge-W7 ndikwazile ukukhuphela ngokuzenzekelayo abaqhubi xa ndidibanisa i-terminal, kodwa khange ibamkele njengediski yediski, nangona ibisitsho njalo (ibha ethe tyaba iskrolela ezantsi kwisiphelo se-android…). Oku kubangele ukuba nesoftware yokuhluma ukuba ihlale ekuqaleni kwaye ndingenzi nto.
Into endiyenzileyo yayikukuyiqhagamshela kwiWindows XP, faka isoftware yokuthengisa kunye nabaqhubi abavela kwiwebhusayithi esemthethweni yakwaSamsung emva koko iyasebenza kwaye inokugxilwa.
2.- Omnye umthetho usilele wakuba wophuliwe, ngakumbi i-chmod 555, kufuneka ibe yi-chmod 555 *. *
3.- Xa ufaka ikhowudi yokuvula, nangona ibonisa ukuba ikhowudi ayilunganga ngoko isebenza ngokugqibeleleyo.
Zonke ezi mpazamo okanye izinto ezingaqhelekanga zenzeke kum ezi-3 endizenzileyo nge-OS Android 2.3.5
Nantoni na, ENKOSI KAKHULU, KWAKUNGOKUQALA
Ihlala indinika imvume eyaliwe
kwaye ndiyenzile yonke into eyithethayo.
Kuya kufuneka ujonge ukuba yonke into ibhaliwe njengoko bendikuxelele eposini, uphawu olulula okanye indawo inokukunika impazamo kwinkqubo.
Kweyokuqala "eyakhe" ebesele endibeka lonto.
Kwenzeka into efanayo kum ... nasiphi na isisombululo?
UViviam Rios Chavez sitsho
Kungenzeka ukuba emva kokuyikhulula, uqhagamshelo lwe-intanethi endinalo ikhontrakthi okanye i-wifi ayisebenzi kum? Enkosi
Phendula kuViviam Rios Chavez
Ndiyenzile malunga neetheminali ezimashumi mabini kwaye khange ndibenangxaki.
Qinisekisa ukugcina ifolda yakho ye-EFS
Isebenza ngokugqibeleleyo kum, enkosi! Bekufuneka ndilandele inyathelo ngenyathelo, ndihlonipha izithuba, amanqaku… .. njl KUSEBENZA !!!!!!!!!!!! 🙂
Alejandro Rosales umfanekiso wokubamba sitsho
Molo, ndiyenzile into oyithethileyo, kwaye yonke into iphuma kude kube linyathelo lokugqibela, kodwa emva koko ndifaka iinombolo zam kwaye indixelela igama eligqithisiweyo, kwaye ekugqibeleni kufuneka ndaliwe kwaye akukho nto .. ayisebenzi, kutheni ?
Phendula u-Alejandro Rosales
UMarcelo Nuñes sitsho
molweni la manyathelo ukuba ayahamba kum
kodwa xa isiza kuwo
Ndifumana impikiswano engekho mthethweni yokuba ndiyikope kakuhle, andazi ukuba kwenzeka ntoni, umntu oza kundinceda
Phendula uMarcelo Nuñes
UTommetal uDela Morte sitsho
Kwenzeka into efanayo kum… sincede !!!
Phendula Tommetal Dela Morte
Into efanayo iyenzeka kum Aissssss
Ndinengxaki xa ndibhala umyalelo we-mkdir wokuvula ndifumana into «isilele ukungavimbi», ifayile ikhona ... Ndicinga ukuba ukusuka apho ndinempazamo kuba emva kwayo yonke into ethi «ayifumaneki» kunye "nobude obungasebenziyo" kunye namagama anje lento kwaye ayindiniki naliphi na inani ... ndiyakopa kwaye ndincamathisele imiyalelo kwaye ndibeka umyalelo ngamnye endiwudibanisayo ... inokuba yintoni ???
Phendula kwi taviosama
Molo kwakhona ... Ndayisombulula ingxaki yam yangaphambili, sele ndinayo ikhowudi kwaye ndiwenzile onke amanyathelo kwaye inethiwekhi yesiqhelo ye-telcel ilungile ukuba iyasebenza, kodwa xa ndibeka i-chip kwenye inkampani (iusacel) ayikhe indibuze Naliphi na igama eligqithisiweyo ... indixelela «inethiwekhi ivinjiwe» kodwa ayindiniki ukhetho lokubeka iphasiwedi naphina…. Ndingenza ntoni ??
kulungile, xa ndibeka umthetho wokugqibela (ikati / ikhadi / ikhadi / unblock / imits / ipso.txt), endaweni yokundinika ikhowudi ,, kwaye ithi: »akukho fayile enjalo», ngaba ukhona umntu owaziyo into endinokuyenza?
Molweni, ndenze yonke into kakuhle, yonke into ibilungile, usuku lokuqala, yonke into ibilungile, emva koko ndaqala ukwenza izindlu ezingaqhelekanga, ndayeka nje ikaka, ingxaki kukuba ifolda ifolda efakiweyo yayicinyiwe kwaye ixesha alinayo imie kwaye mna awunayo ikopi yogcino oyikhathaleleyo ubuncinci yenza ikopi yokuncedisa kuqala ukuba umntu unezisombululo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ngokubhekisele
Molo, xa ndidibanisa i-mini galaxi yam kwi-pc, kubonakala ngathi kukho uhlaziyo lweekies, ndibeka uhlaziyo kwaye iseli "ivaliwe". Ndiyibeka kumanqaku ocaphulo kuba andazi ukuba ndisebenzisa igama ngokuchanekileyo ... into eyenzekayo kwiselfowuni kukuba inescreen esimnyama, kunye nomfanekiso weselfowuni kunye nePC edityaniswe ngamachaphaza kunye nendawo yokukhuza phakathi. Ke ihleli kwaye inkampani indixelela ukuba yingxaki yesoftware kwaye abanakho ukuyilungisa. Ukuba umntu unokundinceda "ndiyivuselele", ndiyayithanda iselfowuni kwaye ndifuna ukuyifumana. Enkosi.
molo jonga ukuba iselfowuni ingena kwimowudi yokwehla kwaye izama ukufaka ithamsanqa elitsha le-rom
ILebron ngumpu sitsho
Enkosi kakhulu, yonke into igqibelele ngexesha lokuqala.
Phendula uLebron NguPufo
Kutheni usitsho ukuba ujikeleze iselfowuni ukuba iza kudityaniswa nekhompyuter, kubonakala ngathi sisiNgesi, asiqondani, thetha ngeSpanish, nceda
Ukuqulunqa i-rooting kukufumana imvume enkulu.
Imbovane Rivas sitsho
Molo uFrancisco, kutheni xa ndincothula i-samnsun mini yam ndingasifumani isikrini kunye nodoli we-android? Ndinesikrini kunye ne-samnsun kwaye ndenza isikwere esineempawu zeepads kunye nee-asterisk ezibeka i-ramdum embindini wesikwere .. kwaye ke ihlala njalo andikwazi ukufikelela kwi-superuser ..
Phendula kwi-Ant Rivas
Ngaba uyasebenza ukulungisa ingxaki kwe-usb?
aber ... mandikuxelele ... Ndifuna ukwenza oku ukuyijikelezisa ukucima ipateni endingayikhumbuliyo ... cofa amaqhosha ukuyijikeleza kwaye yaphuma kakuhle kwiscreen se-superuser, kwaye ngo Impazamo ndinike ukhetho lokuqala, rebort sistem ngoku .. Ndicinga ukuba ... ndaze ndazama ukucofa izitshixo kwakhona kwi-superuser kwaye andikwazi .. Ndifumana le bendikuxelele yona kumyalezo wokuqala? .. Ndingxamile andisifumani isisombululo .. kwaye andinakwenza kwanto cntesta xfavor
Ekuphela kwento onokuyenza kukuphinda ukhanyise nge-odin
Nge-11/09/2012 ngo-21: 55, «Disqus» wabhala:
Ukubulisa, ndilandele onke amanyathelo kwaye andabinangxaki ndada ndaphinda ndaphinda.
Xa ndaphinda ndayiqala kwakhona yayicotha kancinci kodwa yayiqhelekile, emva koko ndayicima ukuze nditshintshe i-chip, emva koko ndaqala kwaye ayizange indibuze ngesitshixo sokutshixa kwaye ingenalo uphawu.
Ndiyicime xa kunokwenzeka kubekho impazamo kodwa ayisayi kuqala, ibonisa kuphela isikrini esimnyama somthala omncinci.
Sele ndizamile ukuqala kwakhona i-OS ngokucinezela iqhosha lasekhaya + lamandla kodwa akwenzeki nto.
Ndilandela onke amanyathelo. Ndiyenzile amatyeli aliqela kwaye ekugqibeleni inani elinika lona luluhlu oluncinci lwamaqanda anophawu olukhokelayo
UFrancisco umbuzo, esi sithuba sisebenza nam kwii-terminals ezivaliweyo zobusela, kuba ndiyifumene kodwa ivaliwe. Ndincede
Umbuzo omnye, kuludwe lwesithathu ubeka i-chmod 555, kodwa ayivakali.
Iya kuba: chmod 555 ukuvula. Hayi ?? Ngaba ufuna ukunika iimvume kulawulo okanye yintoni? Andifuni ukuyenza ude undicacisele lo mbuzo, enkosi ngayo yonke into
Chmod 555? Ngubani omnika iimvume ukuba kukho iodolo kuphela?
UJose Manuel Sorando sitsho
Umyalelo opheleleyo yi-chmod 555 ukuvula
Phendula kuJose Manuel Sorando
Umyalelo wesithathu awulunganga. Kufuneka ube: chmod 555 ukuvula
Isetyenziswa ukunika imvume kwifolda yokuvula.
Ndizamile ngaphandle kokuthandabuza ukuba icace, kodwa ndiyayiphawula kubantu abangayaziyo iLinux.
yeray kodwa tata sitsho
Molweni nonke zilungile de kube yinxalenye yekati / ikhadi / unblock / imits / ipso.txt andazi kwenzeka ntoni kodwa iyandixelela ukuba andixhasi mali plis
Phendula yeray peropadre
Konke kulungile, ndide ndiqalise ukufaka ikhowudi enamanani asi-8. Ke xa ndiqala kwakhona, iselfowuni ixhomeke kwiscreen esimnyama seGALAXY mini GT-S5570, kwaye ayisuki apho.
kulungile kodwa kunzima kancinci kwaye zininzi kakhulu iinombolo eziphambili
Indawo yokuhlala sitsho
akukho fayile enjalo okanye isikhombisi… kutheni iphuma loo mntu… ..oncedo
enkosi sendiyenzile amanqaku ayi-100000… ..ndiyabulela ndoda
qala kwakhona iselfowuni kwisinyathelo sokugqibela sokutshintsha ikhadi kwaye ayikhanyisi kwinto endifanele ukuyenza
Kwenzeka kum ngokufanayo.Ngexesha lokutshintsha ikhadi alisaqali, ngoku ndinephepha elihamba nobunzima.
Awenzanga nto njengoko kuchaziwe kwisifundo, kuba ndikhulule ngaphezulu kweetheminali ngale ndlela kwaye akukho ngxaki.
Ngaba ikhona indlela yokulungisa ingxaki ukuba ayizukuvula ngoku?
Zama ukuyifaka kwimowudi yokukhuphela kwaye ukhanyise i-firmware yoqobo ekhutshelweyo kwiphepha le-sam ephathekayo usebenzisa isixhobo se-odin
Nge-04/09/2012 ngo-12: 24, «Disqus» wabhala:
Ndiza kuyithumela ukuba ilungiswe kuba isenesiqinisekiso
Zama ukukhanyisa i-firmware yoqobo kuqala, ke abaqondi ukuba uyisusile kwaye wayisebenzisa ngobuqili
Nika ingqalelo zonke iipao, utye oonobumba abakhulu nabancinci, kunye nezithuba, ukuba kukho into engaphumiyo njengoko isitsho apha, kukuba wenza into engalunganga.
URafael Torres sitsho
Ewe, ndiyijikelezisile iiveki ezimbini kwaye yandisebenzela ngoku, ngoku ndinee-sims ezintathu ezivela kwiinkampani zeeselfowuni eChile, andinangxaki kodwa ndibacele into engakumbi njengokukwazi ukuba ne-intanethi yasimahla endinayo Umhlobo onesixhobo esifanayo ndihamba ilizwe laseVesino kwaye ndamnika umsebenzi omkhulu nangona engenamali ngaphandle kwam ngaphandle kokuba ne-intanethi yasimahla njengoko esi sixhobo sine-anchor yenethiwekhi kulungile ukusebenzisa incwadana yam isixhobo sam samsung gt5570l ukuba umntu angandinceda nceda i-imeyile yam rafael_viki@hotmail.com Ungandithumelela idatha ayihambanga enkosi kakhulu
Phendula kuRafael Torres
enye into ejijeke ngokupheleleyo kwiselfowuni ..
cima le shit, enkosi ..
Andazi ukuba wenzani ukuyilayisha kodwa ndiyazimela, ndiyenzile amaxesha amaninzi kwaye ngaphandle kweengxaki, njengabasebenzisi abaninzi beBlog. Ukuba isifundo besingalunganga, ngekhe sibekho esiya kuthi siphume silungile.
Ngapha koko, abo baneengxaki bazama ukujonga ukuba bayafikelela na kwimowudi yokukhuphela, ukuba kunjalo, unokuyifumana kwakhona nge-odin kunye ne-firmware yoqobo.
Nge-07/09/2012 ngo-01: 14, «Disqus» wabhala:
Ndiyakuqinisekisa ukuba abo bethu bavinjelwe, ayisiyiyo ukuba asifundanga okanye nantoni na enjalo. Ndicinga ukuba sonke siyayazi indlela yokwahlulahlula isithuba kwibar. Ngapha koko, enkosi ngegalelo, sonke esizama ukwenza into efana nokukhulula iselfowuni ngaphandle kokwazi kwisifundo, kufuneka sazi ukuba kubandakanya umngcipheko.
iya kwimfezeko iqabane !!!.
Andazi ukuba konke okunye kuya kwenza ntoni kodwa konke kuchaziwe ngendlela ekufuneka yenziwe ngayo.
Phendula u Somoslasalsa
Okokuqala, enkosi kakhulu ngesi sifundo simangalisayo, ndiyilandele kwaye yonke into igqibelele ngaphandle kokuba ikhowudi indinika yona emva komyalelo wekati / sdcard/unblock/mits/perso.txt
Ukuba ndisusa ooziro, ndinamanani asixhenxe aseleyo, umzekelo:
I-12345 # 123456700000000000000000000000
Ndibale iphedi ngok?
Ndithatha iqanda ukusuka esiphelweni?
Ngaba ndisebenzisa amanani ama-7 kuphela
Ndicinga ukuba ungafumana i-0 ukusuka esiphelweni kodwa andiqinisekanga ukuba kutheni le nto ingazange yenzeke kum
Nge-13/09/2012 ngo-11: 24, «Disqus» wabhala:
Ngokuqinisekileyo, ukubeka zero ekugqibeleni kugqiba ikhowudi yokusetyenziswa kwaye isebenze ngokugqibeleleyo.
Enkosi kakhulu kwisifundo, esilula nesisebenzayo.
Ewe, icacisele abanye ukuba andazi ukuba benza ntoni na ukutshaja ifowuni.
molo jonga Ndifumene i-sansun galasi mini ime cela i-imeyile ikontra sign ino se kual is kisiera yazi komo kitarlo ndingayikhupha kontuayuda many enkosi ewe unganceda zerlo
muchisisisiisisisisiismas enkosi 😀 ngesifundo sakho ndikwazile ukuvula iself yam enkosi 😀
Molo, ndiwalandele onke amanyathelo ileta, undinike ikhowudi, ndiyayihlonipha kwaye kakuhle, ndicime ukufaka ikhadi lomnye umsebenzisi kwaye ayiqali, ihlala ibanjiwe kwiscreen samnsung. . Into endiyenzayo?
Molo, ndiyifumene ikhowudi yokuvula kodwa xa ndibeka iSIM entsha ukubeka i-PIN kwaye kamva ikhowudi yokuvula, iselfowuni ibhlokiwe kwaye ayidluli kwisamsung yesikrini sasekhaya, ngoko okanye uvule iselfowuni ngesiqhelo. Ndingenza ntoni ??
Iifayile zeJmltortes sitsho
Ngaba ungayilungisa? Kwenzeka into efanayo kum
Kwenzeka okufanayo nakum, ngaba kukho umntu onempendulo yoku?
Ndizamile ukufaka i-rom entsha kwi-odin .. kodwa hayi nokuba ... ndiyathemba ...
Xa ndibaleka -o nosuid, ro, nodev -t vfat / dev / block / stl5 / sdcard / unlock Ndifumana impazamo yokunyuka: impikiswano engavumelekanga, ndingenza ntoni ukusombulula ingxaki? Ndine mini galaxy kunye ne-gingerbread 2.3.6. Enkosi
Mholo ! Ndiwalandele onke amanyathelo kwaye wandinika ikhowudi yokuvula kodwa xa ndingena kwi-sim yomnye umsebenzisi ndifumana umyalezo: ukuvala inethiwekhi kulandelwa kukutshixa kunye negama ukwala, ngenxa yoko ayindivumeli ndingenise ikhowudi, ke Ngaba uyakwenza? kufuneka ndibuze ikhowudi ???
UAlex de la Rosa sitsho
Kwenzeka into efanayo kum. Ndinefowuni yam enefowuni esuka eMexico kwaye andikwazi ukuvula. Into endiyenzileyo kukuyidlulisela kwiGingerbread ngale ncwadi https://www.youtube.com/watch?v=VRvcWz6xwuE (Isebenze kakuhle kum kodwa andinaxanduva lwayo ngenxa yezizathu ezicacileyo) kwaye xa ndibeka i-chip yeMovistar kuyo, yandithumela ngqo kwiscreen ukubeka ikhowudi efanayo.
Phendula kuAlex de la Rosa
Molweni ngoku kum xa ndivula iselfowuni ayiphumeli ukubeka iphini
Phendula kwi Kiles2000
Kunukisa iselfowuni ndiyisiphule kwaye ufake i-terminal endiyibekayo kodwa andifumani kwanto
naziphi na izimvo?
Isebenza kakuhle kodwa ukuba uthenga iglasi yokuphakamisa amanani owonwabileyo hehe
Ndiyabulela ngale nto
Ukugqwesa, namhlanje ndithenge i-mini ukuba ndiyinike intombi yam kwaye ngeyure e-1 sele ndinayo, i-flash entsha kwaye ikhululekile njengomoya. Enkosi.
Ndilandela onke amanyathelo. Ndiyingcambu kwaye indinika ikhowudi. Xa ndiqala kwakhona kwaye ndibeka ikhadi lomqhubi elitsha, isikrini sokufaka loo khowudi asiveli
Ngaba ungandichazela malunga nokuhluma.
Kwaye kwisihlomelo Ukukhulula i-terminal apho ubeka khona »emva koko siya kungenisa lo myalelo ulandelayo», andifumani myalelo wokungena ngaphambi kokucinezela u-Enter.
UZulaika Idalia Nava Bajo sitsho
enkosi !!! Ekugqibeleni ndikhuphe i-galaxy mini yam !! Ndineempazamo ezithile kodwa kungenxa yokuba bendiphoswa ziileta kunye nezinto ezincinci ezinje, ukuba benza izinto njengoko zinjalo, incwadana ihlala ihleli! Iseli yam isebenza nge-100% enkosi!
Phendula Zulaika Idalia Nava Bajo
emva koko bhala cd / sddcar njenge-ace ukuya ezantsi
Ndiyenzile kwaye isebenza ngokugqibeleleyo kum, ewe, ngokuhlonipha bonke oonobumba, izithuba / nayo yonke into…! kukuba ayisiyo cd / sddcar yi cd sdcard. Konke okugqibelele
ams ndibeke »yakhe» ...
su: akafumaneki ..? Ithetha ukuthini loo nto 🙁
molo ndiyifumene i-mini galaxi ndingayikhupha ngaphandle kwe-sim yoqobo kuba indibuza ipini kwaye andilahleki
Ndizamile ukuvula i-mkdir iyandiphendula ukusilela ukuvula, ifayile ikhona Ngaba inokuba yeyokwenza ngaphandle kwesim? Ngaba ndingayenza ngenye i-sim engeyoyokuqala?
Idatha ka-Alex sitsho
disculap ndingena ngokufanayo kodwa xa inkwenkwe ivula mkdir iphuma ukuba kukho ukusilela kwaye konke kulungile okanye kuyanceda nceda
Phendula kwiDatha yeAlex
myalelo mni ongaphumiyo?
Enkosi, isebenze ngokugqibeleleyo kum.
Molo, sele ndinenombolo, nangona kunjalo xa ndibeka i-sim yomnye umsebenzisi, ayindibuzi ikhowudi yokuvula; Inokuba kungenxa yokuba nditshintshe i-rom ukuya kwifowuni? Ndingenza ntoni?
Ngesitshixo sokuqinisekisa ukuvulwa, iyandixelela yonke into ukuba icinyiwe, kodwa xa ndibeka iSIM indivumela ukuba ndibone abafowunelwa kwikhadi lam leSIM kodwa ayindivumeli ukuba nditsalele umnxeba kwaye kubonakala Iminxeba engxamisekileyo kuphela, ndingenza ntoni yenza? Ndilindele impendulo yakho kungekudala kwaye ungandinceda. Yonke enye into yaphuma ngokugqibeleleyo, ezo nkcukacha zibalaseleyo. Enkosi.
enkosi kakhulu, ndifumene
Enkosi kakhulu, ulubisi, ndilufumene ngaphandle kwengxaki
ilunge kakhulu, ukuba iyasebenza nge-100% enkosi
Isixhobo sikaJuanjo sitsho
Ndiwenza amanyathelo ngokuchanekileyo, ndingena imiyalelo ngokuchanekileyo, ndiyitshintsha i-sim kodwa indibuza ikhowudi yokuvula .. kutheni kungenjalo?
Phendula kuJuanjo Arma
Indawo yeVicente_287 sitsho
Ola Ndivula iselfowuni yam kwaye ayiyiboni iSIM kwaye ayindibuzi ikhowudi yokuvula, ayiboni ne-SIM yoqobo nayiphi na impendulo ????
Ndilandele onke amanyathelo kwileta kwaye ayiyiboni i-SIM yoqobo kwaye ingaphantsi kweyomnye umsebenzisi, ngoku iselfowuni ivuliwe ngokuthe ngqo kwaye ayiceli khowudi yokuvula, nceda nceda !!!!
Ndimgxothile, kwaye xa ndibeka lo myalelo: SU akukho nto ivelayo !!
Isebenza ngokugqibeleleyo, yeka ububhanxa, ukuba ayisebenzi, kungenxa yokuba uyenzile kakubi, ixesha. Kuya kufuneka uyihloniphe YONKE into ethi ... izithuba, iideshi, imigca egobile nayo yonke loo nto.
UFrancisco, konke oku kufuneka kwenziwe ngefowuni eqhagamshelwe kwikhompyuter? Inkqubo yesiphelo ye-Android nayo ikhutshelwe kwikhompyuter? Enkosi ngempendulo yakho, ndiyindoda entsha kule nto.
Yonke into yenziwa kwiselfowuni
Nge-09/11/2012 ngo-22: 53, «Disqus» wabhala:
Enkosi ngempendulo yakho ekhawulezileyo; Ndizakuzama ndikuxelele.
Ukutshintsha umthetho wesithathu "chmod 555" ukuya "chmod 555 ukuvula" kusebenza ngokugqibeleleyo nokuba "ukwehla ..." akusebenzi, kuyamangalisa kodwa kuyinyani. Enkosi.
I-PS: Ukuba xa ubeka «su» iwindow ephezulu ayiveli okanye ibuyise i- «su ayifumanekanga» oko kuthetha ukuba unayo i-app «superuser» efakiweyo kodwa AKUKHO INDAWO YOMNXEBA, ke uyixhome nge, umzekelo , Ingcambu yokuvula ukuba yeyona ndiyisebenzisileyo.
Ndiyathemba ukuba ndiye ndanceda ukufaka isandla kwinto ethile. Ciao!
Ukuba wenze impazamo yokuchwetheza? Yintoni ekufuneka yenziwe? Ndiyabulela kwangoko
Iluncedo kakhulu, enkosi !!
Ndiyabulela kakhulu!! Ndiyivulile nje !! Iinkcazo ezilungileyo kakhulu! Umbuliso
Molo ipowusta iyavela kwaye ayindivumeli ndingene naphina apho ndenza khona ipowusta ithi isicelo sokuqalisa samnsung inkqubo com.sec.android.app.twlauncher iyekile ngokungalindelekanga zama kwakhona ukunyanzela ucinezele akukho nto
Yenziwe inyathelo ngenyathelo kwaye isebenze ngokugqibeleleyo, enkosi ngegalelo, ukubona izithuba endicebisa ukuba ndizikope kwaye ndizincamathisele kwincwadana yokubhala ibonakala icacile.Ndibulela kakhulu !!!!!!!
Enkosi ngesifundo ndiyilandele njengoko uyibeka kwaye ndikwazile ukuyikhupha nangona ndingakhange ndiyidinge kodwa bendifuna ukuyivavanya ukuze isebenze ngokugqibeleleyo enkosi 🙂
Iiglasi ezaphukileyo sitsho
AMABILI AMAZWI, ESSSE-LENTE ENKOSI
Egqibeleleyo, enkosi kakhulu, indikhonze kwiifowuni ezininzi.
Ngokubuya umva okungaqhelekanga, kodwa kugqwesile. Enkosi!
Phendula ku An
Xztn Cs sitsho
Ngaba kukho ingxaki ukuba ndinenguqulo ye-Android ngo-2.3.6?
Phendula kwiXztn Cs
Xa ndibeka i-terminal kwaye ndibetha ukungena, andifumaneki, kufuneka ndenze ntoni?
Angello D Tuman sitsho
Kuyasebenza 100% enkosi kakhulu AngelloDtuman -Peru
Phendula u-Angello D Tuman
molo uyayazi ukuba ungayenza njani iHuawei u8180
Ndenze yonke into njengoko ubuyitshilo kwaye yonke into ilungile, bantu, hloniphani izithuba kwaye ngaphambi kokubhala qinisekisa ukuba kulungile kwaye ulandele inyathelo ngalinye, yeyona ndlela ifanelekileyo yokuba yonke into ihambe kakuhle. Enkosi!
Molo… kwaye ifayile 'perso.txt' ndiyifumana phi……. Xa ndingena 'cat / sdcard/desbloqueo/mits/perso.txt' ndifumana umyalezo 'akukho fayile okanye isikhombisi' esibonisa ukuba le fayile ayikho kulawulo lwam ...
Ndilindele impendulo yakho
Kwenzeka into efanayo kum, kuyacaca ukuba emva kwekati kukho indawo, ndiyishiyile kumzamo wam wokuqala, okwesibini, ngendawo ngaphandle kwengxaki, indinike ikhowudi kwaye ndayikhupha ifowuni ngokuchanekileyo. Ndiyathemba ukuba kwenzeka into efanayo kuwe kwaye uyayifumana
Indawo ayisebenzi kum kodwa ithi iyafana ...
Ndikwazile ukuyigqiba yonke le nkqubo kwaye ndiyibhalile ikhowudi ephepheni. Xa ndiqala kwakhona iselfowuni ndishiyekile kwiscreen sokuqalisa kweSamsung. Into endinokuyenza
MAMELA KAKUHLE "INSULTO" NDIMELISE I-MOBILE NDAKWENZA NGOKUFANELEKILEYO NGOKUTSHO, NDIYIBUYISILE KWISITINI NE-ODIN KUNYE NE-ROM (2.3.6) YAYIQALA KODWA I-MOBILE ASISAHAMBI, YITHI YINTONI ENGAKUQINISA KAKHULU I-ARIA PQ, NDICEBISA UKUBA AKUKHO MNTU ONOKUKWENZA OKANYE UZOKUHLALA UNGAKHO MOBILE, ANDAZI UKUBA UFUMANA NTONI NGELIQELA LE «INSULTAZO» …… ..
chetos ... sitsho
Kwafuneka ndiguqule umgca we-555 njengoko besitsho kumagqabantshintshi.
Phendula kwiitos ...
Enkosi ndikhululwe ngaphandle kweengxaki, nangona indibiziwe kancinci kuba ungadideka ngokulula kwinqanaba lesine, elona lide, kodwa ixesha lesine ngumtsalane.
Kwabonakala kukuhle ngexesha lokuqala! Enkosi kakhulu kuba ndizamile nabanye kwaye akukho nto milllll kwaye ngamanye amaxesha enkosi
Phendula uEl Capricho
Yonke into igqibelele, enkosi
J. Sanchez sitsho
Kukho indlela elula, engenazitena. Ndiyikhuphile iYoigo's Galaxy Mini S5570 ngokukhuselekileyo kwaye ngokulula kakhulu. Inkqubo yile ilandelayo:
1: ube yingcambu (jonga kule post http://www.htcmania.com/showthread.php?t=230297 )
2: faka ibhokisi exakekileyo. Yenza ibhokisi exakekileyo kwaye ukusuka apho unike ukufaka
3: faka usetyenziso lweGalaxyAceUnlock
4: baleka ukuvula
5: bhala ikhowudi yokuvula
6: beka sim yomnye umsebenzisi
7: beka ipini yesim
8: faka ikhowudi yokuvula
Ukuba ikunika impazamo kwikhowudi, ingayihoyi, isebenza ngokufanayo.
AKUKHO bungozi bokwenza izitena kwifowuni nokuba uyabhideka malunga nekhowudi.
Ndiyathemba ukuba iyakusebenzela njengam. Konke okugqibelele
Phendula kuJ. Sanchez
Okokuqala, enkosi kuJ. Sanchez.
Le ndlela ingentla khange indinike umyalelo we-mount, inika impazamo, kukho into engalunganga, kodwa andazi ukuba yintoni.
Ndigqibile ukuyenza ngale ndlela. Kulungile ibingumxube. Ndifakele i "SuperOneClick" ukuyincothula ifowuni. jonga apha kwaye usebenzise oku: https://www.androidsis.com/como-rootear-tu-terminal-android-con-superoneclick/
Apho isithi khetha indawo yonke, ndisebenzise i-auto. Oku kubangela ukuba isicelo esibizwa ngokuba yi "SuperUser" sifakwe kodwa singasebenzi. Oku kuvumela ukufikelela kumlawuli okanye kwinqanaba lomlawuli wenkqubo ye-Android.
Nje ukuba ugqibile, qala kwakhona iselfowuni kwaye ndiyenze nge-sim esebenza kwimvelaphi. Ndayifaka ngokuthe ngqo into ethethwa nguJ.Sanchez, »faka usetyenziso lweGalaxyAceUnlock»
Uyayiphumeza kwaye ibize isicelo sangaphambili kwaye ibuze amalungelo esuphavayiza, uyayamkela kwaye ibuyele kwisicelo seGalaxyAceUnlock, cofa kwindawo yokuvula kwaye ulinde ikhowudi, kungathatha imizuzu emi-1-2 kum kundithathe kancinci kuno 30 ″.
Emva koko uqala kabusha nge-sim entsha kwaye ufake inombolo oyinikiweyo, indinike impazamo yokuvula, kodwa ndiyamkele kwaye IYASEBENZA !! Nge pepephone kunye ne-yoigo ndizamile kwaye iyasebenza kwaye kwasekuqaleni yayivela eTelefonica.
Ndifumana impazamo xa ndingena kumyalelo cd / sdcard Ndifumana i-ccd / sdcard ayifumanekanga
Ukuba ubhale njengalo myalezo, kuyinto eqhelekileyo ukuba ikunike impazamo ... jonga kwizithuba, zibaluleke kakhulu.
kuhle kakhulu ndiyikhuphile iamsamsung ace
U-Luis C. sitsho
Kusebenza ngokugqibeleleyo enkosi mhlobo wam !!!!!!!
Phendula uLuis C
ugqibelele. Ukunyamekela is syntax kuye kwandilungela. Enkosi
Kukhutshwa !!! Enkosi kakhulu kwisifundo, ingcaciso nje, kuya kufuneka uhlele inqaku ngokutshintsha inyathelo lesithathu kwaye ubeke into echanekileyo ethi 'chmod 555 ukuvula', kungenjalo igqibelele.
ANDIKAVIVINYWA NELINYE IKHADI LOMSEBENZI, KODWA YONKE INTO YAYILUNGILEYO, NGAPHANDLE KOKWENZAKALISA IFONI, NDIYAKUVUYISELA, NABA BAKUGXEKAYO ... KUYAKUBA ABABHALI NGOKULUNGILE IMIYALELO, IZIKHALA, IIKOMASI, IIBHOLA , ETC ... UVUYO OLUHLE KUNYE NDINQWENELA XA NDIBEKA ISIMI SOMNYE UMSEBENZI WONKE INTO YONYAKA, JE, JE.
Phendula u BRUJILLALEN
molo, ifowuni ayivuli
Inokuba wenze into embi.
Nge-05/02/2013 ngo-12: 55, «Disqus» wabhala:
Ndenze yonke into njengoko injalo kwaye xa ndizokuvula ifowni ayivuli.
leyo yinto ongayibona ngaphambili.
Uya kudla indawo ethile okanye enye into, kuya kufuneka ujonge ukufikelela kwimowudi yokukhuphela kunye neflash firmware yoqobo kunye ne-odin, kwi-Androidsis unesifundo esipheleleyo sendlela yokuqhubeka.
Nge-05/02/2013 ngo-13: 01, «Disqus» wabhala:
URafa Exposito sitsho
XA NDIBEKA intaba -o nosuid, ro, nodev -t vfat / dev / block / stl5 / sdcard / unlock
ISIHLALELA UKUBA NDIBEKA: INKOSI
Phendula kuRafa Exposito
UAndrew Weiss sitsho
Enkosi kakhulu, yandinceda, ndalandela amanyathelo njengoko ndihambile, emva kokufaka ikhowudi yokugqibela, ukuqala kwakhona ifowuni kwaye iyasebenza, enkosi nemibuliso
Phendula u-Andrew Weiss
Ndenze yonke into endiyithethileyo kwaye xa ndibeka ipassword endikunike yona, ndinempazamo, ngoku ndinekhadi elidlulileyo kunye nelinye endilifumanayo ukuba andinayo inethiwekhi
Molo, ndenza yonke into ngokuchanekileyo, kodwa xa ndiqala kwakhona, ayibuzi khowudi, ithi kuphela umnxeba ongxamisekileyo
Kwenzeka into efanayo kum, kwaye andinakuyifumana ukuba andibuze ikhowudi yokuvula. Ngaba ukhona umntu onesisombululo?
Ndifuna ukuyenza nge-2 encinci
Molo ndikhuphe i-samsung mini gt-s5570 kodwa ndinenye i-samsung mini gt-s5570l kwaye kuloo nto ndiye ndafumana impazamo yentaba: impikiswano engavumelekanga ndenza yonke into njengoko ichaziwe apha ngasentla kwaye kuvavanywa amaxesha aliwaka kwaye akukho nto ilungileyo kuba sele ndiyenzile i-samsung yokuqala kwaye ukuba ikhutshiwe yanceda
ukukhwela -o nosuid, ro, nodev -t vfat / dev / block / stl5 / sdcard / ukuvula xa ndisenza njalo kulapho ndifumana impazamo endiyenzayo? Ndiqhubeka nokwenza inkqubo nokuba ndiyatsiba loo mpazamo? »
Ukuba yingcambu, kwaye ndikopa ngokwenyani imiyalelo, khange ndibenangxaki
Ukugqibelela, okokuqala yaphuma. Kum kube luncedo kakhulu ukukopa imiyalelo ekufuneka ingeniswe kwi-Android yesiphelo sendlela kwi-NOTES BLOCK, ukubona ngokugqibeleleyo izithuba, ezingafaniyo kakuhle kwiwebhu.
Ukuphinda izithuba kusebenza ngokugqibeleleyo
HEY SIYABULELA AMADODA, UMSEBENZI WONKE NAMAGUNYA, AMAVANDLAKANYA ANGABUXAKI AKUKHUMBULEKI UKUBA ZONKE IINTLOBO ZEMFUYO KWI-FLOKI YOMDALI WETHU, SIYABULELA KAKHULU ISIFUNDO SIBALULEKILE….
I-LINUX COURSES BOYS NDIYAZI UKUBA KUKHULU KAKHULU KODWA YAYISEBENZELA MNA KUKHO APRT ENDIYIKHIPILEYO I-CHMOD 555 IVULA
Ewe, emva kokumkhulula, akazukundivumela ukuba nditsalele umnxeba okanye ndibamkele, ngubani onokundinceda?
UJose Antonio Huerta sitsho
ENKOSI KAKHULU, isebenze ngokugqibeleleyo kum, ENKOSISSSSSSSSSSSS
Phendula ku jose antonio huerta
Sebastian Colmenero sitsho
IPOSA EBALULEKILEYO !! SIYAVULELA NDIYENZE NJENGOKO UCHAZA ISEBENZA
Phendula uSebastián Colmenero
Ndicinga ukuba ndiyikhuphe ngaphezulu kwamaxesha amabini ngaphandle kokuyivula kwakhona kuba bendingazi ngoku ukuba ndingayenza ???? Ndifuna izisombululo yyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaa
I-Bueenass ikhupha i-samsung galaxy mini kwaye kuyabonakala ukuba uyenza ngaphezulu kokuphindwe kabini ngaphandle kokuyiqala kwakhona, ayisebenzi okanye into enjalo, ndizamile kwaye akukho nto ndinokuyenza
Ekuphela kwento endinokukucebisa ngayo kukuya ku-smobile.com kwaye ukhuphele i-firmware yoqobo kunye nezixhobo zokuyikhanyisa ukubona ukuba oku kuyakusombulula ingxaki, nangona ndiyibona inzima.
Ngaba ukhuphele ifolda ye-efs?
yiyo i sitsho
usisidenge ... ngale miyalelo, awukopi nantoni na, uhambisa ifayile, kwaye kulapho iingxaki ziqala khona, ukongeza kwinto yokuba ulahlekile ngamanyathelo ama-2 kunye ne-emulator yesiphelo ..., ke, ukuba awulandeli amanyathelo kwileta, uya kuxhasa ngemali iselfowuni ...
Ngaba ukhona umntu owake wacinga ngokujonga i-imei emva kokuyikhupha ngoluhlobo? Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kweyodwa okanye i-imei itshintshiwe, okanye ngokuthe ngqo, ihambile ...
Le ndlela iyasebenza, kodwa ayikhuselekanga. INDLELA EKHUSELEKILEYO YOKUKOPA IFAYILI.
Yile nto ikopi yokuncamathisela ekufuneka uyenzile ngaphandle kokujonga ngokusondeleyo ukuba uyikopa phi ...
Emva kokulandela amanyathelo ngamanye xa ndifika ekuvulekeni kwe-mkdir, i-mkdir ehlakaniphileyo ayiphumelelanga ukuvimba, i-fie ikhona qee agooooo ??????
ndibulela kakhulu!!! ungoyena ulungileyo, isebenza ngokugqibeleleyo zombini ukubamba kunye nokuyikhulula !! enkosi
Lo mfo akayazi into ayibethileyo, uyazi ukuba uvelaphi
Molo, ndilandele amanyathelo ngokwento ayitshoyo apha, kodwa xa ndiqala kwakhona iselfowuni ndiyekile ukufunda ii-sims. Ndingenza ntoni kule meko?
Ukuvula i-samsung galaxy mini nge-01/04/2013 ngaphandle kwengxaki. Ekuqaleni ndandingalunganga; Okokuqala kuba ndilibele ukufaka ikhadi le-SD kwaye xa ndikope eminye yemiyalelo. Nje ukuba ezo bugs zimbini zilungisiwe, zasebenza ngokugqibeleleyo. Ukuqwalaselwa: Kwimeko yam emva kwe- # xa ndithatha amanani asibhozo, UKUBA kuye kwafuneka ndithathe u-0; kuba kungenjalo yayinamanani asi-7 kuphela; Ndide ndafumanisa ukuba iinkcukacha ndinemizamo emibini engaphumelelanga.
Emva kwala manyathelo, i-galaxy mini yam ilahlekelwe yi-imei, kunye neziphumo zokuba akukho sims ziyandazi. Ndingenza ntoni ngoku?
Amandongomane ^ 3 ^! sitsho
Andizifumani iimvume zabangaphezulu .-.
Phendula kwiPeanut ^ 3 ^!
Yonke into ihambe kakuhle kodwa xa ndifaka i-sim khadi entsha, iwindow endibuza ipini yekhadi ayiveli. Yifowuni ethengwe eSpain kwaye ndise-UK. Ngaba kuya kufuneka ndiyisebenzise ikhowudi ye-sim yekhadi ngaphambi kokuyifaka kwifowuni ukuvula? 🙂
ungogqibelele!! Ndijonge izifundo ezili-100 kwaye akukho nanye yazo eye yandisebenzela… i-samsung galaxy mini 2.3.4 lonke ixesha lokuqala. enkosi qhekeka!
Phendula uphawu lokumakishwa
Ngaba iyasebenza kunye ne-S3 nayo? 😀
Ujikeleza njani ...
I-Sarissima santos sitsho
Valeu !!! Muito obrigada ... já tava ndincamile kunxunguphalo olungaka.
Phendula uSarissima Santos
Ami isebenzele mna okokuqala enkosi mzalwana
Ubulungisa obunxilileyo sitsho
Ewe, isebenze njengomama obalekayo kum, elungisa umthetho wesithathu kunjalo.
Njengoko besitsho umyalelo wenyathelo lesithathu ngu "chmod 555 ukuvula"
(ngaphandle kokubeka iikowuti)
Emva kokuba ufumane ikhowudi, iphedi akufuneki ibekwe kuloo nto, njengakwimiyalelo, umtya wokuqhankqalaza uhambelana nephedi, into engenakuphepheka inokukhokelela kwimpazamo
Nje ukuba ufumane ikhowudi, xa ndicela ikhowudi yokuvula, amanani kuphela asebenzayo kwaye kuphela i-10 yokugqibela
Kukho ingxaki yekhusi encinci kangangokuba i-terminal inako, ke kungcono ukubeka unobumba ngonobumba ngokucothayo kwaye ujonge ngononophelo yonke into esiyibhalayo, kwaye ngokufanayo xa ukopa ikhowudi yokuvula, kwaye ngokufanayo nexesha lokuqhubeka Ukuvula.
Undixelele ukuba ikhowudi ayilunganga, kodwa akuba eyishiyile loo menyu, wandibamba ngesigqubuthelo nge-sim evela komnye umsebenzisi kwaye ngoku ikhutshwe ngokugqibeleleyo.
Enkosi ngeposi, inyani kukuba khange ndicinge nokuhlawula i-20 euros ukuyikhupha kwaye enkosi koku ndafumana inkululeko ha ha ha
Ewe, bantu, ndiwenzile onke amanyathelo ekufuneka ndiwalandele njengoko kubhaliwe kweli phepha, ndiyifundisile kwaye ndibeka ukuvula i-chmod 555 kunye nayo yonke into, kodwa ngexesha lokutshintsha i-sim ndibeke ipini kwaye khange ndiyibethe ngoyaba I-pantaya de ndiyivule ai umntu uyazi ingulube pussy yenzeka lonto ???
KULUNGILE, NDIBEKE: INGXOXO Engekho semthethweni
Ndingayisombulula njani loo nto ???
UManuel Angel Lopez Valverde sitsho
Masibone, ndiza kuphawula ngeebugs ezincinci endizibonileyo ukuba akukho mntu, akukho mntu uphawuleyo kulo naliphi na iphepha apho kuvela esi sifundo sinye. Kumatyeli amaninzi, amaxesha amaninzi ndifumana izixhobo ezingazamkeliyo ezi "generic" khowudi. Ngoba izikhombisi ozivezayo azisoloko zezi, ndinika ingxelo kwisisombululo esinokubakho kwiimpazamo ezininzi ezineekhowudi.
- cd / sdcard (uya kubona umyalezo omncinci ubeka «/ mnt / sdcard», jonga kakuhle le)
-mkdir / mnt / sdcard / ukuvula
- chmod 555 / mnt / sdcard / iyavula
-Khwela -o nosuid, ro, nodev -t vfat / dev / ibhloko / stl5 / mnt / sdcard / vula
- ikati /mnt/sdcard/unblock/mits/perso.txt
- Sithatha ikhowudi, khumbula, ukuba banamanani asi-8, ukuba umzekelo ikhowudi ngu-123456 # 1234508000000000000000000000000 kwaye sithatha inombolo engu-1234508 ayizukusebenzela thina, ke sithatha u-0 olandelayo, ngaloo ndlela sishiya u-12345080.
-Senza onke amanyathelo achaziweyo ukuvula ifowuni.
Ndiyathemba ukuba ndikuncedile, kuba kwenzeka into efanayo nakubantu abaninzi, kwaye abafumani mpendulo, ngenxa yoku, sendikhathalele ukuyisusa, ukubulisa kubo bonke.
Phendula uManuel Angel Lopez Valverde
Kukhutshwa !!! Enkosi kakhulu kwi
isifundo, inqaku nje, kuya kufuneka uhlele inqaku
Ukutshintsha inyathelo lesithathu kwaye ubeke into echanekileyo eyi 'chmod 555
iyavula ', kungenjalo igqibelele.
Phendula kwi- QUOTING
Kukhutshwa !! Kakhulu. Isikhokelo esilula kakhulu. Enkosi!!!
Phendula u Diadoro
Ugqibelele !!!!! Isebenzile kum njengoko ipapashwa !!! Enkosi kakhulu !!!!
Ukuba yonke le nkqubo iyasebenza, kuphela kwingcambu kukho isimelabizo ku-youtube, kukho indlela ebhetele yokujikeleza ifowuni kwaye nantsi indlela yokuvula iselfowuni
Amagama omnxeba we Carol sitsho
Molo WONKE UMNTU, masibone ukuba ukhona umntu onokundinceda. Iyasilela kumyalelo we-4 indixelela ukuba ifayile ayikho kwaye andisazi ukuba ndenze njani. Enkosi kakhulu.
Enkosi ngolwazi oludala ndigcinile imali elungileyo kwaye ndinayo njengenzuzo, hahahahahaha
Enkosi kakhulu, isebenza ngokugqibeleleyo
UFrancisco, ukuba ndikope ngokungalunganga ikhowudi yokuvula kwaye ayamkelwa, ndingaphinda inkqubo yonke kwakhona ukuqinisekisa onke amanani asibhozo? Amanani amancinci kangangokuba aqondwa ngokucacileyo
usebenzela ezinye iimodeli ze-Android?
Isebenza ngokugqibeleleyo. Enkosi kakhulu ngegalelo, kwimizuzu nje embalwa ndiyikhuphile i-Samsung Galaxy Mini GT-S5570 ngaphandle kweengxaki ngokulandela amanyathelo kwisifundo sakho.
Abo banengxaki yokungenisa imiyalelo yeLinux, ndicebisa ukuba bazikopishe kumhleli wokubhaliweyo (umzekelo, iZwi), ukuqinisekisa ukuba zikhona na izithuba kwaye azikho. Kwaye kolunye uhlobo lweengxaki, jonga ulwazi malunga nemiyalelo yeLinux kwaye ke ngoko uyazi ukuba yintoni eyenziwayo kwaye uyijonge.
Ndilibele ukuthi kuyinyani ukuba umgca apho amalungelo okufikelela atshintshiwe kufuneka ujongeke ngolu hlobo:
"Chmod 555 vula"
Akubonakali kum ukufaka ikhowudi yokuvula, ndibona kuphela inani le-sim kodwa hayi ukuvula u-UNCEDO 🙂
molo umntu owaziyo ukuba kutheni engasebenzi nomistister xa sele ndiyikhuphile ukuba kukho umntu owaziyo ukuba enze ntoni nditsalele umnxeba ku-687314838 okanye undithumelele i-imeyile ku mazallu@hotmail.com Ndiyabulela kwangoko
Enkosi kakhulu ngencwadi yakho eluncedo kakhulu. Ndifuna ukukunika izimvo ezimbalwa:
- Apho ithi: "chmod 555" kufuneka ibeke: "chmod 555 vula"
-Ukuba kufanelekile ukuba uthathe amanani ama-8 owabonisayo ekugqibeleni nokuba eyokugqibela ingu-zero.
Okokugqibela, ukuba sithenge iglasi yokwandisa ukubona la manani 😉
Ndiyabulela kakhulu majete. Isebenze ngokugqibeleleyo. Yayivela ekugabheni kwaye sele isebenza nejazztel. Enkosi kwakhona, igalelo elifanelekileyo.
Yalatha njengoko ugxa wakho watsho ngaphambili, ukuba ulahlekile igama elithi "vula" emva komyalelo we-chmod 555
Molo uFrancisco, andinayo i-sim yangaphambili, inye kuphela endifuna ukuyenza, ndingayifaka le ndiyenze kakuhle? Enkosi kakhulu
awunakuvula kwimodeli yesamgung gt - s5300t nceda uncede
Xa uqala mobile ayibonakali ukubhala ikhowudi yokuvula, ndenze ntoni?
Indawo cruz sitsho
Ngaba ukukhupha i-s4mini yam kuneziphumo? wenza umonakalo kumqondiso?
UFernando Alves Arias obambe umfanekiso sitsho
Molo, uya kubona ndinomthala we-mini gt-s5570 kwaye bendifuna ukuyikhulula, ndiyigxile kuhlobo lwe-2.3.6 kwaye ngokufumana kwakhona nayo yonke into, inyani kukuba bendizakuyikhupha ngendlela yakudala nge Imiyalelo kwisiphelo sendlela, nanjengoko ukufakela ifolda kungandivumeli ukuba ndikope nje ifayile ye-stl5 kwi-pc yam kwaye ndayoyivula ngenkqubo ebizwa ngokuba yi-wingimage ndaya kwi-txt ndayivula kwaye ikhowudi yaphuma, ndakopa kwaye ubeke enye i-sim kwaye akukho nto ... ithi ikhutshiwe iyaqonda nayiphi na i-sim, kodwa ayindivumeli ukuba nditsalele umnxeba okanye ndibizwe, imiyalezo kunye ne-intanethi ewe kodwa hayi iminxeba. yintoni endinokuyenza kakubi? Ndiludinga kakhulu uncedo ... umbuliso kunye nombulelo.
Phendula uFernando Alves Arias
Ndayikhupha ngaphandle kokuhluma ingafundi sim yenye inkampani
Ngaba iya kusebenza nge-Samsung Galaxy mini 2 ?????
USilva Pau sitsho
Molo Q Teng Q Aser weQ Q yam yeAnde Is Samsung Galaxy Mini. Xa ivuliwe, ayibizi mali, iyayicima iSamsumg kwaye ukukhanya kuvele ngasemva, kodwa ayichazi ntoni?
Phendula uSilva Pau
Ndenze onke amanyathelo afanelekileyo, ilahlekile ukufumana ikhadi elitsha le-sim. Iqala kwakhona kwaye iyaqhubeka njengangaphambili, ngaphandle kokufumana ikhadi lomnye umsebenzisi
Khuphela i-S-Voice kwi-Samsung yakho nge-Android 4.0